N ingbo Rykay Electric Co., Ltd. ari speacialized mukubudisa Mini firiji & motokari unotonhorera & bhokisi inodziya, chando maker, doro unotonhorera, etc. Tine ruzivo makore anopfuura 16 ari mumunda uyu.
W E kunge zvakavakwa simba uye refu co-kushanda ukama wakakura kwazvo makambani mukati basa iri mhiri kwemakungwa. Nokukurumidza uye nyanzvi mushure-sale basa nechikoro nokuda boka redu consultant ane mufaro kutenga edu. Detailed Info uye parameters kubva Zvarakashambadzira zvimwe kutumirwa iwe chero kwazvo bvuma. Free mimwe varwirwe uye boka tarisa kuti sangano redu.
O Ur kambani auya kuzotora kuoneka pamwe yakatsiga kukura uye kupayona spirits.Our RYKAY muchiso zvemagetsi kutonhora uye kudziyisa chikwata uye motokari fridges dzinoitwa yakanaka nezvinhu, michina yemhando yepamusoro, anokwezva design, yakatsiga uye hwakavimbika quality, Shona adopts AC / DC simba zvitengeswa uye nyore kutakura. The zvigadzirwa dzakakurumbira kutengeswa kuJapan. South Korea, USA, UK, Australia, etc. Our zvinhu zviri zvakanaka nokugamuchirwa vatengi.
boka redu kugamuchira vakwegura uye zvitsva vatengi bhizimisi pamwe.